UJimmy Hoffa, i-Legendary Teamsters Boss
I-Teamsters Boss ixhamle kunye ne-Kennedys, ilahlekile kwi-Gang Gang Hit
UJimmy Hoffa wayengumphathi weqela leQelaters Union xa ebizwa ngokuba ngumntu owaziwayo kwisizwe ngokuhamba noJohn noRobert Kennedy ngexesha lokuvalelwa kwee-Senate ngasekupheleni kweminyaka ye-1950. Wayesoloko ehlelwa ngamarhweba ukuba abe nolwaphulo-mthetho olunxulumene nolwaphulo-mthetho, kwaye ekugqibeleni wakhonza isivakalisi kwintolongo yaseburhulumenteni.
Xa uHoffa eqala ukuba ngumdumo, waqikelela i-aura yomntu onzima onokulwa nomfana omncinci.
Kwaye wathatha amaqhinga angcono kubaqhubi beloli abakwa-Teamsters. Kodwa amaqhekeza malunga nokudibanisa kwakhe kunye nesihlwele sasisoloko esifihlile naluphi na ukufezekiswa okusemthethweni ayenayo njengenkokeli yomsebenzi.
Ngenye imini ngo-1975, emva kweminyaka embalwa emva kokukhululwa kwakhe entolongweni, uHoffa waphuma waya kusemini waza wanyamalala. Ngelo xesha kwakukholelwa kakhulu ukuba wayeceba ukubuyela ekubandakanyekeni ngokuthe ngqo kwiqela le-Teamsters, yaye kwakucingelwa ngokubanzi ukuba wayelixhoba lezenzo zokulwa.
Ukukhangela uJimmy Hoffa waba yintlupheko yesizwe kwaye ukukhangela umzimba wakhe kuye kwavela rhoqo kwiindaba ukususela ngelo xesha. Imfihlelo malunga nokuba yayikuphi indawo yabangela iingcamango ezingenakubalwa, amahlaya amabi, kunye neengcamango zasezidolophini.
UJames Riddle Hoffa wazalelwa eBrazil, e-Indiana, ngoFebruwari 14, 1913. Uyise, osebenza kwimboni yamalahle, wafa ngesifo esiphene ngokuphefumula xa uHoffa engumntwana.
Unina kunye noodadewabo bakaHoffa babehlala bebuhlwempuzekileyo, kwaye njengomfana osemtsha uHoffa washiya isikolo ukuba athathe umsebenzi njengomsebenzi weenqwelo zokuthengisa kwi-Kroger.
Kwiintsuku zobumbano zakuqala zeHoffa wabonisa italente yokuxhaphaza ubuthathaka bomdlali. Ngethuba esemncinci, uHoffa wabiza isiteleka njengamaloli athatha i-strawberries eza kwindawo yokugcina impahla.
Ukwazi ukuba i-strawberries ayinakuhlala ixesha elide, ivenkile ayinakukhetha ngaphandle kokuxoxisana ngemigomo kaHoffa.
Iqela leHoffa elimele, elibizwa ngokuba yi "Boys Strawberry," lijoyine i-Teamsters yendawo, eyaye yadibanisa namanye amaqela eQelasters. Ngaphantsi kolawulo lukaHoffa, ummandla wendawo wakhula ukusuka kwamalungu ambalwa ukuya kuma-5,000.
Ngowe-1932, uHoffa wathuthela eDetroit, kunye nabahlobo abasebenza naye eKroger, ukuba bathathe indawo kunye nabahlali be-Teamsters eDetroit. Kwiingxaki zengqesho ngexesha loKuCaluleka okukhulu , abaququzeleli bemanyano bajoliswe kubudlova ngeenkampani ze-goon. UHoffa wahlaselwa waza wabethwa, ngokubala kwakhe, amaxesha angama-24. UHoffa wathatha udumo njengomntu ongeke esatshiswa.
Ekuqaleni kwee-1940 iiHoffa zaqala ukuqhagamshelanisa nolwaphulo-mthetho oluhlelekile. Kwesinye isiganeko, wabhalisa amaqela aseD Detroit ukuba aphume emanyano kunye neCongress of Industrial Organizations. Ukuqhagamshelana kweHoffa kunye nama-mobsters kunengqiqo. Ixhoba lakhusela iHoffa, kwaye isongelo esichengileyo sobundlobongela sasithetha ukuba amazwi akhe athathaka kakhulu. Ngokubuyisela, amandla kaHoffa kwimanyano yabemi avumela ama-mobsters asongele abanikazi bendawo bendawo. Ukuba abazange bahlawule umrhumo, iilori eziye zenza iindleko zingaphuma kwisiteyibrari kwaye zenze i shishini lime.
Ukuqhagamshelana nama-mobsters waba luleke ngakumbi njengoko i-Teamsters iqokelele imali eninzi kwimali kunye neentlawulo zemali yomhlalaphantsi. Le ngxowa-mali inokuxhaswa ngemali yeebhola, njengokwakhiwa kweehotele zaseLas Vegas . I-Teamsters, kunye noHoffa uncedo, yaba yibhanki yengulube kwiintsapho zobugebengu ezihlelwe .
Amandla kaHoffa ngaphakathi kweqela leQela likhule kuma-1950. Waba ngumbutho wezonxibelelwano eziphambili kumazwe angama-20, apho ayekulwa ngokukhathala ngamalungelo abashayeli bamaloli abemele. Abasebenzi befayile nabasebenzi befayile bamthanda uHoffa, bahlala bememeza ukuxhaphaza isandla kwiintlanganiso zemanyano. Ngeentetho ezithunyelwa ngezwi elimnyama, uHoffa walingisa umntu onzima.
Ngomnyaka we-1957, ikomidi le-Senate elamandla lase-United States yophando ngokuxhatshazwa kwabasebenzi laqala ukuqhuba iingxoxo ezijoliswe kwiqela le-Teamsters.
UJimmy Hoffa wahlasela abazalwana bakaKennedy, uSenator John F. Kennedy waseMassachusetts, kunye nomntakwabo uRobert F. Kennedy , isiluleko kwikomiti.
Kwiindlebe ezivakalayo, iHoffa ixakeke kunye nabaphathi bee senenari, bebhenca imibuzo yabo ngeendlela zokuhamba ngesitalato. Kwaye akukho mntu ulahlekelwa yinto engathandekiyo uRobert Kennedy kunye noJimmy Hoffa babenomnye nomnye.
Xa uRobert Kennedy waba ngummeli-jikelele kumlawuli wakhe, enye yezinto eziza kuqala kukubeka uJimmy Hoffa ngasemva. Icala lokubambisana noHoffa ekugqibeleni wamgweba ngo-1964. Emva kweenqununu zezibheno, uHoffa waqalisa ukugwetywa entolongweni ka-Matshi 1967.
Ukuxolela nokuzama ukubuyela
NgoDisemba 1971, uMongameli uRichard Nixon wathetha isigwebo sikaHoffa waza wakhululwa entolongweni. Ulawulo lwe-Nixon lubandakanya ilungiselelo lokuguqula ukuba akabandakanyekanga kwimisebenzi yamanyano kude kube ngo-1980.
Ngowe-1975, uHoffa waxelwa ukuba abe nefuthe kwi-Teamsters ngelixa engekho ngokubandakanyeka. Watshela abahlobo, kunye neentatheli zincinci, ukuba wayeya kufumana kunye nalabo abasemanyeni kunye nesihlwele esamngcatshayo kwaye samnceda ejele.
NgoJulayi 30, 1975, uHoffa watshela amalungu omndeni ukuba uya kudibana nomntu ekudleni sasemini kwivenkile yokudlela edolobheni laseDetroit. Akazange abuyele kumhla wakhe wesidlo sasemini, kwaye akazange abonwe okanye abuzwe kwakhona. Ukusabalalisa kwakhe kwangoko kwakuba yimbali enkulu yeendaba kwiMelika. I-FBI kunye nabasemagunyeni basekhaya baxoshe amacebiso angenakubalwa, kodwa iziganeko zangempela zazininzi.
IHoffa yayiphelile, kwaye yayicinga ukuba ixhoba lehlwele libethe.
Njengento ekhethileyo yokuphila ubomi obunzima, uHoffa waba ngudumo ngonaphakade. Yonke imbalwa embalwa enye inkolelo yokubulala kwakhe iya kuvela. Kwaye ngamaxesha amaFBI aya kufumana isicatshulwa kwisihlwele esineenkcukacha kwaye athumele abadlali ukuba bambe emva kwamasango okanye kwiindawo ezikude.
Enye into efunwa yi-mobster yakhula yaba yindalo yasemadolobheni: Umzimba kaHoffa waxelwa ukuba ungcwatyelwe phantsi kwendawo yokuphela yeGiants Stadium, eyakhelwe eNew Jersey Meadowlands ngexesha eliqhelekileyo iHoffa.
Abadlali bamaKhosi baxelele amahlaya adlala kwiHoffa ngokunyamalala iminyaka. Ngokutsho kwe-site ye fanistic yaseNew York, umdlali wezemidlalo uMarv Albert, ngelixa esasaza umdlalo weGiants, uthe iqela "likhaba kwiHoffa ekupheleni kwebala le midlalo." Kule rekhodi, le midlalo yachithwa ngo-2010, kwaye akukho mkhondo kaJimmy Hoffa owafunyanwa phantsi kweendawo zokugqibela.
Iinkokheli zeHarlem Renaissance
I-Anthology: Inkcazo kunye nemizekelo kwiNcwadi
Umbutho kaZwelonke wamaTyhini aBawo: Ukulwa noBulungisa boBuchule
Iyini izinga lokugcinwa kweekholeji neeyunivesithi?
KwiiNgingqi ze-United Kingdom
Ukukhula koQoqosho: iiMveliso, uPhuhliso, kunye neeTyons
Ukutshintsha i-Front Wheel Bearing
Funda indlela ikhamera ye-Brownie yashintsha ngayo imifanekiso
Iimpawu ze-Dark Lady Shakespeare